अध्यक्ष बन्न शितल निवासदेखि बालुवाटारसम्मको फोन
काठमाडौ : नेपाली शेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि खोलिएको शेयरबजारको नियामक नियका नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफै थला परेको छ । बोर्ड अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ ।
यसअघि अध्यक्ष रहेका डा. रेवत बहादुर कार्कीको असोज २९ गते पदावधि सकिएपछि धितोपत्र बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । उनले अवकाश पाएपछि अब नयाँ अध्यक्ष को हुने भन्ने कुराले शेयरबजार क्षेत्रमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजारलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी मनमामैजी तरिकाले चलाएका काँग्रेसी कार्यकर्ता डा. कार्कीको विरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा परेपनि उनलाई कारबाही भएको छैन ।
४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी असोज २९ गते धितोपत्र बोर्डबाट विदा भएका उनले धितोपत्र बोर्डलाई कमाई खाने भाडो बनाएका थिए । उनलाई बचाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवका र उनकी पत्नी आरजू राणा लागेको श्रोतको भनाइ छ ।
कार्कीको बहिर्गमनसँगै नयाँ अध्यक्ष को आउला भन्ने चर्चा अहिले बोर्ड परिसरमा चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कसलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन लाग्लान् भन्ने बारेमा भने तत्काल नै केही भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसलाई ग्रिन सिग्नल दिन्छन् उनै अध्यक्ष हुने लगभग पक्कापक्की छ । तथापी अहिले बोर्डको अध्यक्ष हुने चर्चामा चार जनाको नाम रहेको छ । जसमा भदौको पहिलो साता मात्रै बोर्डको विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका भीष्मराज ढुंगाना, नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु, बोर्डका पूर्व विज्ञ सदस्य निलबहादुर सारु, नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीको नाम निकै चर्चामा रहेको छ ।
यी व्यक्ति मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले जसलाई चाहन्छन् त्यही अध्यक्ष हुने श्रोतको दाबी छ । भदौ पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको विज्ञ सदस्यको रुपमा भीष्मराज ढुङगानालाई नियुक्त गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका ढुंगानालाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोर्डको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । उनलाई विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरी बोर्ड अध्यक्ष बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई निर्देशन नै दिएको उनी स्वम् बताउदै हिँडेका छन् ।
त्यसो त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि राष्ट्रपतिले चासो लिएपछि राष्ट्रपतिकै कोटामा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका खतिवडाले गुनासो गर्र्दै हिडेको चर्चा पनि अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहमा सनिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत ढुङगाना ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकास पाएका हुन । उनलाई भदौ पहिला साता मन्त्रिस्तरीय बैठकले विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको हो । यसरी ढुंगानालाई विज्ञ सदस्य बनाएपछि अध्यक्षका लागि झनै बाटो खुलेको चर्चा पनि रहेको छ ।
बोर्डको अध्यक्षका लागि आकांक्षीका रुपमा बोर्डकै पूर्व विज्ञ सदस्य निलबहादुर सारु मगर पनि लबिङमा लागेका छन् । उनले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँग निकट सम्बन्ध रहेकोले आफू अध्यक्ष बन्ने बताउदै आएका छन् ।
यस्तै बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी पनि चर्चामा छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निकट मानिन्छन । अधिकारी लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेर हालै मात्रै अवकाश पाएक हुन । राष्ट्र बैंकको कायर्कारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका अधिकारी खतिवडा गभर्नर हुँदा दाहिने हातका रुपमा चिनिन्थे । अर्थमन्त्री खतिवडाकै जोडबलमा उनी नेपाल बैंकको अध्यषमा नियुक्त भएका हुन ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा अर्थमन्त्री खतिवडाको जिल्लाबासी नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरुको पनि चर्चा रहेको छ । पनेरु पनि अध्यक्ष हुनका निम्ति दौडधुप गरिरहेका छन् ।पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निकट मानिएका पनेरु अध्यक्षका लागि नेकपाभित्र लविङ गर्दै आएका छन् । बोर्डको अध्यक्षको दाबेदार सबै जना नेकपा निकट मानिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा कसले बाजी मार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । द नेपालटपबाट